शरीरमा भुत छ भन्दै साधुले महिलालाई नंगाए , भिडियो बन्यो भाईरल (भिडियो सहित) | Butwal Dainik
२९५२ पटक पढिएको
शरीरमा भुत छ नाङ्गै भएर हिँडेर मेरो अगाडी आइज भन्यो । साइन्स दिन दिनै अगाडी बढिरहको छ तर अन्ध विश्वास भने यो समाज मा यति पसि सकेको छ कि ।यसबाट निस्कन पनि मुस्किल छ ।यो कुरा हो गुज रात सर सपुर एउटा गुल्दास को हो । त्यहाँ बस्ने एउटा महिलालाई एउटा तान्त्रिक ले घरवालको अगाडिनै नाङ्गै बनाई दियो। महिलाले यो कुरा मेघादि नगर पुलिस स्टेसन मा निवेदन दिई ।
महिलाले भनिकी म र मेरो बुडा २ ओटा बच्चा सँग बस्छौं छ महिना देखि ।मलाई शारीरिक तनाव थियो त्यसैले मैले दबाई खाए र त्यसपछि पनि मलाई केही राम्रो भएन ।यो कुरा मैले मेरो घर परिवारलाई सुनाए घरवाला ले भने हामीले चिनेको एउटा चन्दन नगरमा एउटा तान्त्रिक छ उसले ठीक गराउँछ तँलाई ।
ठीक हुन्छ भन्ने विश्वासले मा अगाडी बढे तर तान्त्रिक ले यस्तो भन्यो की सुनेर म हैरान भए ।तान्त्रिक ले भन्यो कि १५ वर्ष देखि तँलाई भुत लागेको छ ।कपडा खोल म भगाई दिन्छु एकदिन महिला बुडा सँग देवर को घर गई जहाँ उसको ससुरा मांग भाई र छिमेकी लीला बैनी थिए l र त्यस पछि मलाई लिएर तान्त्रिक को मा गए ।
यी महिला भन्छिन् कि तान्त्रिक ले सबैको अगाडी भन्यो कि उसलाई १५ वर्ष देखिन भुत चढेको छ ।भुत भगाउन को लागि मलाई केही गर्नु पर्छ ।यसको कपडा फेर्नु पर्छ त्यसपछि चेतन तान्त्रिकले केही कपडा दियो ।त्यो तान्त्रिक को नाम चेतन थियो ।
कपडा दिएपछि तान्त्रिक ले भन्यो कि त कपडा खोलेर सबैको अगाडी १५ पाईला हिँडेर मेरो अगाडी आइज त्यति बेला देवर देउरानी र लीला बहिनी पनि थिए । बुढा र ससुरा बाहिर थिए ।तान्त्रिक ले भनेर महिलाले आफ्नो सरीरको सबै कपडा खोलि ।
तर डर लागेपछि मैले देउरानी सँग तान्त्रिकले दिएको कपडा ले आफ्नो शरीर छोपे ।महिलाले यही भनी यस्तो घिन लाग्दो गराउछन। अन्ध विश्वास मान्छेको दिमाखमा घुसेको छ। र यसको फाइदा यस्तो तान्त्रिकहरुले उठाई रहेका छन।
त्यति बेला जब महिला नाङ्गै थिइन् तब उसको शरीरमा तान्त्रिकले पानी खनायो अनि कागती दिँदै भन्यो सब ठिक हुन्छ ।त्यसपछि तान्त्रिक ले सबलाई घर जान भन्यो ।र महिलाले आफ्नो बुढालाई भनी कि यो भुत प्रेत सबै झुट हो ।
यो कुरामा बुढाबुढीको झगडा भयो र महिला त्यसैको कारण उ आफ्नो माइत गाई ।उसले आमा बुबालाई सबै कुरा भनिन् ।कसरी तान्त्रिक ले उसलाई गलत गर्यो । तान्त्रिकको पछि लाग्दा फाइदा केही हुँदैन ईज्जत मात्र जान्छ ।
थरीथरीका बाबा : अघोरी र नागा बन्न के गर्छन् ?
झट्ट हेर्दा धेरैलाई पशुपतिमा देखिने साधुहरु उस्तै लाग्छन् । कतै श्मसानमा बस्ने अघोरी, कतै फोटो खिचाउनको लागि व्यस्त गेरु बस्त्रमा भेटिने साधारण साधु त कतै ना`गाबाबाहरुले पशुपति क्षेत्र भरिभराउ हुन्छ ।
तर, ती साधुहरु देख्ना सामान्य देखिनेभएपनि वास्तविक अघोरी र नागाहरु एउटा कठोर तपस्या पूरा गरेर आएका साधकहरु हुन्छन् । हामीले झट्ट हेर्दा पशुपतिमा दुई किसिमका साधुहरु देखिन्छ । एकाथरीकाले वस्त्र नलगाई दिगम्बर भेषमा भष्म दलेर बस्ने गर्छन् ।
कपडा नलगाएका जति सबैलाई हामी नागा मान्ने गर्छौं । अर्का किसिमका साधु भेटिन्छन् गेरु वस्त्र लगाएका साधुहरु देखिन्छन् । तर, साधुहरु को हुन् ? हामीले देखेको वस्त्र`हीन साधु सबै नागा हु्न् ? या वस्त्र लगाउनेहरु सबै अघोरीहरु हुन त ?
शिव एवं उनका अवतारहरुलाई मान्ने विभिन्न सम्प्रदायहरु हुन्छन् । तिनीहरुको पनि आआफ्नै अनुयायी हुन्छन् । ती अनुयायीहरुको आफ्नै शैली र विशेषता हुन्छ । पाशुपत सम्प्रदाय, शैव सम्प्रदाय, कापालिक सम्प्रदाय, वीर शैव सम्प्रदाय, कारुक् सिद्धान्तवादी सम्प्रदाय, प्रत्याभिज्ञावादी सम्प्रदाय मुख्यतया शैव`मार्गीहरुको मुख्य सम्प्रदायहरु हुन् ।
त्यसमध्ये पनि शैव र पाशुपत सम्प्रदायमा धेरै साधक एवं अनुयायीहरु रहेको पाइन्छ । शैव भित्र पनि शाक्त, नाथ, दसनामी, नागा जस्ता उपसम्प्रदाय रहेका छन् ।
महाभारतमा माहेश्वरको चार सम्प्रदायको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा शैव, पाशुपत, कालदमन र कापा`लिक रहेका छन् । ऋग्वेदमा रुद्रको आराधनामा १२ रुद्रहरु नै अघि गएर शिव शंकर, भोलेनाथ र महादेव कहिने गरेको उल्लेख छ ।
साधुहरुलाई नाथ, अघोरी, अवधूत, बाबा, अघड, योगी, सिद्ध आदि नामले जान्ने गरिन्छ । शैव सन्तहरुमा नागा साधुहरु एवं दसनामी सम्प्र`दायका साधु|हरुको नै प्रभुता रहेको पाइन्छ । सन्यासी सम्प्रदायका साधुहरु संसार र गृहस्थीलाई छाडेर आउने गर्छन् । गृहस्थ`हरुको जीवन जति क`ठिन हुन्छ । त्यसको सय गुणा बढी कठिन साधुहरुको जीवन हुने विश्वास गरिन्छ ।
शैव सन्तहरुमा गुरु मत्स्येन्द्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, साईनाथ, गजानन् महाराज, कनिफनाथ, बाबा रामदेव, तेजाजी महाराज, चौरंगीनाथ, गोगादेव, शंकराचार्य, गोपीनाथ, चुढाकरनाथ, भर्तृहरि, जालन्ध्रीपाव आदि हजारौं प्रसिद्ध सन्तहरु रहेका छन् । यसरी शिवरात्रिको लागि त्यही गुरुहरुले बोकेको सिद्धान्त अनुसा`रको वस्त्र एवं व्यवहारलाई उनीहरुका अनुयायीले समेत अवलम्बन गर्ने गरेका छन् ।